Guadalupe Grande. 4 yenhetembo dzake mundangariro dzake | Zvazvino Zvinyorwa
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Vanyori, Noticias, Nhetembo
Guadalupe Grande, mudetembi Madrilenian, munyori wenyaya uye kushoropodzwa, akafira muMadrid paakango tanga iyi 2021 nekuda kwe chirwere chemoyo, nemakore makumi mashanu nemashanu. Mwanasikana akasiyana nevanyanduri zvakare Felix Grande uye Francesca Aguirre, nemagumo ake mutsara wakatanhamara wedzidziso. Mukurangarira kwake, zvinoenda izvi kusarudzwa kwenhetembo ina zviri zvebasa rake.
2.4 Padivi pemusuwo
Degree mu Zvemagariro anthropology kubva kuComplutense University, pahupenyu hwake hwese akabata mumitambo yekunyora yakadai seyekutanga Ibero -American Poetry Show uye neMedellín International Poetry Festival, kana iyo INVERSO Madrid mutambo. Semunyori wezvekunyora, aishanda muEl Independiente, El Urogallo, Reseña, kana El Mundo, pakati pemamwe mapepanhau nemagazini.
Akashandawo munzvimbo yekutaurirana ye Royal Theatre uye aive nebasa redetembo ra José Hierro Yakakurumbira University, muSan Sebastián de los Reyes.
Muna 1995 akapihwa mubairo weRafael Alberti kubudikidza Bhuku raLilith, uye zvakare akaburitsa mabhuku enhetembo Iyo mhute kiyi, Mamepu eWax y Hotera yehedgehogs.
nyora chaiyo nhamba
izvo zvatisingagone kunzwisisa
Ini ndinoti hapana kukanganwa.
kune rufu nemumvuri wevapenyu,
Kune zvakaputsika nechikepe uye ndangariro dzakachenuruka
pane kutya nekushaya hanya
uye zvakare mimvuri uye kutonhora uye dombo.
Kukanganwa chingori chiumbwa chezwi;
kungoguma nekusingaperi kunoenda
kubva kunyama kusvika kuganda uye kubva kuganda kusvika kubhonzo.
Seizvo mazwi ekutanga akagadzirwa nemvura
uye shure kwebwe nemhepo.
Kufamba hakuna kukwana
guruva remugwagwa harigadzi hupenyu
uye furo pashoko
Uri kutsemuka munguva, Baba:
hapana mauri chinogara uye zvese zvinogara.
Taura izwi rekutanga
uye njodzi yacho yaive imwechete,
panguva iyoyo patinokukwevera
zvingadai zvisina kumboitika,
uye zvakadaro yakasimba mimvuri
mukudaidzwa kwake kwenyama,
kuomesa mweya wako
uye akaomesa shoko rake.
Kurarama hakuna zita.
Isu inyaya yekushamisa
ndiani aida kutiudza
kuti takatambura zvakanyanya
Asi ndangariro yedu haitsva
uye hatichaziva kufa
ndangariro yemazuva nehupenyu,
banga rinovhura nyika
kufambisa zvimwe zvivindi zvandisingakwanise kuzvinzwisisa.
Kuyeuka kwemasikati uye chiedza,
ndiwe murindiri asingagone,
iyo kambasi yakaoma, chapupu chemujeri
iwo mafundo nguva mutorongo rayo.
Chii chauri kutsvaga, ndangariro, chii chauri kutsvaga.
Unonditevera sembwa ine nzara
uye munotarira netsitsi dzenyu patsoka dzangu;
kunhuwa, zvine njodzi, munzira
mucherechedzo wemazuva aive,
kuti havasisipo uye kuti havazombovapo.
Madhende emufaro anokupfekedza
uye dongo raita kuti iwe uve wakangwara;
ndangariro dzehupenyu, ndangariro dzemazuva nehupenyu.
Mumba hamuna munhu
Kunhuhwira kwetariro yakaipa
mafuta anonhuwira pakona imwe neimwe
pokugara mugwenga iri.
Ndiani akaita kuti titende, tivimbe,
iyo kuseri kwemusuwo, pasi pemukombe,
mudhirowa iro, mushure meizwi,
mune iro ganda,
ronda redu raizopora.
Ndiani akachera mukati memwoyo yedu
uye gare gare akashaya kuziva chokudyara
akatisiyira gomba iri risina mbeu
uko kune tariro chete.
Ndiani akauya achitevera
uye akatiudza zvinyoro-nyoro,
kuti pakanga pasina kona yekumirira.
Ndiani aive nehutsinye, ndiani,
akavhura humambo uhu pasina makapu kwatiri,
vasina madhoo kana maawa akapfava,
pasina matauriro, pasina mazwi ekuumbiridza nyika nawo.
Kwakanaka ngatiregei kuchema futi
manheru achiri kunonoka zvishoma nezvishoma.
Ngatitorei rwendo rwekupedzisira
chetariro yakashata iyi.
Source: El Mundo - Nhetembo dzeMweya
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Noticias » Guadalupe Grande. 4 yenhetembo dzake mundangariro dzake
Idzo nhetembo dzakanaka uye mukadzi anonzwisisa uye ane muenzaniso.
Maitiro ekuisa makoma nenzira kwayo
Antonio Munoz Molina. Bhavhdhe. Zvimedu zvemabasa ake